Thola i-Arribes del Duero Natural Park | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | España, Yini ongayibona
El Ipaki yemvelo i-Arribes del Duero Yindawo evikelekile etholakala emphakathini ozimele waseCastilla y León, oseduze komngcele nePortugal. Itholakala phakathi kwezifundazwe ezimbili, iSalamanca neZamora. Engxenyeni yesiPutukezi, leli paki lase livikelwe ngo-1998 ngaphansi kwegama le-International Douro Natural Park. Endaweni yaseSpain yayivikelwe ngo-2002.
Igama elithi arribes livela esiLatin ad ripa-ae, okusho ukuthi ugu. Le paki yemvelo yakhiwa yi inkambo yemifula eminingana, njenge-Agueda, iDuero, iHuebra, iTormes, i-Uces ne-Esla. Leli gama libhekisela ezinhlotsheni ezinamadwala zamabhange akhiwa ukudlula kwamanzi. Kuyindawo engokwemvelo lapho sinezinto eziningi okufanele sizenze futhi sizibone.
1 Imizila e-Arribes del Duero
2 Imizana epaki
4 Ukuhamba ngomfula
Imizila e-Arribes del Duero
Kule paki yemvelo kukhona izindlela eziningi zokuhamba izintaba lokho kungenziwa, okunye kufushane impela kanti okunye kukude. Iningi ligijima ezindaweni ezithambile, ngakho-ke azinzima kakhulu. Lezo eza emifanekisweni efanele yilezo eziphakeme kakhulu kwamanye amaphuzu. Umzila GR-14 no GR 14 1 yiwo ohamba epaki usuka enyakatho uye eningizimu cishe amakhilomitha angama-200, uhlanganisa amadolobha, kepha ezinye izingxenye noma eminye imizila emincane ingenziwa. Konke kubhalwe uphawu futhi kufanele simane sihloniphe imvelo kanye nezinkomba ezikhona.
El ISendero de las Merchanas yindlela ehamba amakhilomitha ayisishiyagalolunye nokuthi yini engenziwa ngezingane. Kulo mzila oyisiyingi ungabona izinqaba bese ulandela udonga lokwakha. Umzila weSalcelle-Aldeadavila unamakhilomitha angama-30 futhi unconywa kakhulu ngobuhle bezindawo ezibukeka kahle. Kunezindawo zokubuka eziningi eduze komfula ukucabanga ngokufika.
La Umzila weCola de Caballo Inebanga lamakhilomitha ayi-9 futhi kuyo ungabona iMpophoma iCola del Caballo. Ungabona futhi umlomo womfula i-Uces eDuero, ngakho-ke kuyindlela encane kepha enamaphuzu wokuthakazelisa. Emzileni osuka ePereña uya eMirador del a Ermita uhamba amakhilomitha ayisithupha lapho ungabona khona imihosha yemifula futhi uya naseHermitage yeNuestra Señora del Castillo ngemibono yeDuero neMount Berrocal. Umzila osuka eMieza uye eCerezal ungamakhilomitha angama-70 ubude futhi wenzelwe amabhayisikili. Le ngenye nje yemizila eminingi engalandelwa e-Arribes del Duero.
Ngaphakathi kwepaki yemvelo akukho ukusweleka amadolobhana amancane athandekayo abanendlela ethule yokuphila. Eminye imizila ihamba phakathi kwabo kepha singabavakashela njalo uma befika ngemoto.
I-Ahigal de los Aceiteros Kuyidolobha elincane umsebenzi walo omkhulu ukukhiqiza uwoyela. Kuleli dolobha kunesonto eline-altare lakudala elidala kusukela ngekhulu le-XNUMX elenziwe nguFelipe Cervera, owayengumfundi weChurriguera odumile.
I-Aldeadávila de la Ribera Yabizwa ngu-Unamuno njengenhliziyo yama-Arribes futhi yaziwa kanjalo-ke. Kuleli dolobha ungavakashela i-Ecotourism Museum Las Majadas Arribeñas lapho ungafunda khona ngendlela yempilo yabelusi bezimbuzi. I-El Picón de Felipe yindawo yokubuka yedolobha lapho ungabona khona umfula nedamu. Leli dolobha linalo nolwandle lwalo lokufakelwa lapho ungahamba khona ngesikebhe noma ungene emikhunjini yemikhumbi. Epaki ungabona futhi amanye amadolobha afana ne-Argañin nesonto laseSan Bartolomé, iBarruecopardo, iBermellar enebhuloho elingaphezu komfula iHuebra kanye nezinqaba zeCeltic, iCabeza del Caballo noma iFariza.
Kunezindawo eziningi zokubuka ezitholakala kuleli paki lemvelo, ezinye zitholakala ezindleleni zokuhamba izintaba nokunye okungatholwa ngemoto. I- IMirador El Torojón itholakala edolobheni laseFermoselle, enemibono emihle ngedolobha nase-Arribes del Duero. Leli dolobha futhi linombono we-El Castillo. IMirador Las Fallas isenkabeni yeVillarino de los Aires, lapho kukhona neMirador del Duero, enendawo yepikiniki yokuphumula. IMirador El Salto iseduze kwaseSaucelle, ukuze bakwazi ukubona ama-Arribes nedamu. IPenedo Durao Viewpoint iseFrexoxo, ePortugal, futhi inemibono emihle kakhulu yepaki yemvelo.
Okunye kokuhlangenwe nakho okunconyelwa kakhulu e-Arribes del Duero thatha omkhulu cruise emfuleni ukujabulela leyo mihosha nemibono eyinhlanhla yazo. Izitimela zingathathwa ezindaweni ezahlukene. Isikebhe iFermoselle sisuka eBemposta ePortugal. I-Arribes del Duero cruise kwemvelo isuka eMiranda do Douro Environmental Biological Station futhi ingenye yezinconywe kakhulu. I-Vilvestre river cruise isendaweni yaseLa Barca, amakhilomitha ambalwa ukusuka eVilvestre. Lawa amaphuzu amathathu okwazi ukubona lezi zindawo ezisemfuleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » Ipaki yemvelo i-Arribes del Duero